VaultPress miaro ny WordPress azo antoka | Martech Zone
VaultPress mitazona ny fiarovana ny WordPress
Zoma 4 Novambra 2011 Alarobia, Novambra 9, 2011 Douglas Karr
Mipetraka eo amin'ny Automattic trano heva ao amin'ny Blog World Expo (hery siphoning) ary niresaka tsara tamin'ny ekipa WordPress momba ny tetik'asa maromaro niarahanay niasa ary koa ny firesahana ireo fanovana sy fanamby atrehinay amin'ireo mpanjifanay. Iray amin'ireo ahiahy ireo ny fiarovana sy backup.
Hafahafa fa tao amin'ny fiarahamonina WordPress nandritra ny fotoana kelikely aho, nefa mbola maheno momba ireo programa sy rindranasa efa an-taonany maro nefa tsy hitako! Iray amin'izany VaultPress. VaultPress dia serivisy azonao ampiana amin'ny bilaoginao nampiantrano anao WordPress izay sady hanara-maso ny filaminan'ny bilaogy no hitazona ny famerenan'ny atiny tsy tapaka.
Ity misy topy fijerena horonantsary momba an'i VaultPress:
Tsy toy ny serivisy fanefana tranonkala ivelan'ny tranonkala hafa, VaultPress raha ny tena izy dia manidy ny nomaniny ho solon'izay tsy an-tranonkala rehefa manoratra ianao… toy ny endri-tsoratra autosave ao anatin'ny mpanonta WordPress. Milay loatra!
Endri-javatra tsara iray hafa an'ny VaultPress dia ny fanaraha-maso ny fiovana rehetra amin'ny fametrahana ny kaody WordPress anao. Averina ihany koa, ny tombony an'io dia ilay fianakaviana Automattic iray ihany izay mivoatra eo amin'ny sehatra WordPress dia manoratra ny sehatra fanaraha-maso izay miantoka ny filaminanao. Ny plugins na plugins mampidi-doza tsy misy filaminana azo antoka dia vavahady hidiran'ireo mpijirika ary hanindry kaody mankany amin'ny pejy hafa ao anatin'ny WordPress, ka hahatonga ny tranokalanao ho vavahady ho an'ny mpanao ratsy.
VaultPress dia serivisy mandray karama, nefa mora vidy tokoa drafitra izay manomboka amin'ny $ 15 350 $ isam-bolana (ho an'ny orinasa). Notsapaiko ny MyRepono saingy tsy plugin tsotra ampiasaina izany - ka nivadika ho VaultPress aho!
Tags: automatticmyreponoVaultPressbackup an'ny WordPress
Iza no misakana anao?